Ellicott Dredge Oo Dhameystirtay Mashruuca Soo celinta Xeebaha - Ellicott Dredges
Grand Popo, Benin: Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Joogtada ah ayaa goor dhaweyd qandaraas siisay, oo ay maalgalisay Bangiga Adduunku, qandaraas ku-meel-gaadhka ah ee Galbeedka Afrika. Saadka iyo Caawinaada SA. in laga saaro inka badan 100,000 oo yaadir oo dhudhun ah oo daad ah Wabiga Mono ee Grand Popo, Benin.
The Baanka Adduunka Waxaa la ansixiyay $ 210 milyan oo lagu maal geliyo mashruuc gobol loogu magac daray Galbeedka Xeebta Galbeedka Afrika (WACA) Barnaamijka Maalgashiga Resilience. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in laga ilaaliyo nabaad-guurka xeebaha iyada oo loo marayo hawlo badan oo ay ka mid yihiin dib u soo celinta dhul daaqsimeedka, dib u buuxinta xeebaha, iyo dhismaha biyo-biyoodka.
Grand Popo, oo loo yaqaan bulshada kalluumeysiga caan ah, ayaa u nugul cudurka fatahaadda sababtuna tahay xeebta aan horumarin iyo isbedelka cimilada. Maalgelinta barnaamijka wuxuu daboolayaa kharashka ku soo celinta wabiga ee dadka deggan noloshooda ku tiirsan Webiga Mono oo ah isha cuntada, nolosha iyo nafaqada.
Saadka iyo Caawimaada SA adeegsaday a Ellicott 370 Dragon® Kala-go ’ in la dhammaystiro mashruuca iyada oo dib looga weecinayo wabiga Mono wadiiqadii uu ka dhacay waddo u dhow taas oo muddo kadib baabi'isay si looga hortago in daadku mustaqbalka dhaco.